နည်းပညာသတင်း | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
Showing posts with label နည်းပညာသတင်း. Show all posts
iPad Proကို ပြိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်လာတဲ့ Microsoft ရဲ့ Surface Pro Tablet
နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Microsoft ဟာ ပဉ္စမ မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Tablet ကို Surface Pro လို့ နာမည် ပေးထားခဲ့ပြီး ယခင် မော်ဒယ် များနဲ့တော့ ဒီဇိုင်းပိုင်း ဆိုင်ရာမှာ သိပ်ခြားနားမှု မရှိဘဲ ထွက်လာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီကြီး တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Microsoft ဟာ laptop-tablet နှစ်မျိုး သုံးနိုင်တဲ့ ဒီ Surface pro ဟာ Apple ရဲ့ ipad pro ကိုတော့ မယှဉ်ပြိုင်နိုင် သေးပေမဲ့ Samsung စတဲ့ နည်းပညာ ကုမ္ပဏီများရဲ့ ထုတ်ကုန်တွေ ကိုတော့ ယှဉ်ပြိုင်နိုင် လိမ့်မယ် လို့ မျှော်လင့် နေပါတယ်။
အမေရိကန် နည်းပညာ ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Microsoft ဟာ တရုတ်နိုင်ငံ ရှန်ဟိုင်းမြို့မှာ Surface Pro ရဲ့ သတင်း အသေးစိတ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး အမေရိကန် နည်းပညာ ပစ္စည်းများကို ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ သူများ အတွက် ရည်ရွယ် ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Microsoft ဟာ laptop-tablet နှစ်မျိုးသုံးနိုင်တဲ့ နည်းပညာသုံး Tablet ကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ Surface ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ စတင် မိတ်ဆက် ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Microsoft ဟာ Surface Pro ရဲ့ ဘတ်ထရီ သက်တမ်းဟာ ၁၃ နာရီ ခွဲကြာ ခံနိုင်တယ် လို့ ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဒီဘတ်ထရီရဲ့ လုပ်ဆောင် ချက်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ မော်ဒယ် ဖြစ်တဲ့ Surface Pro4ထက် ၅၀ % ခန့် ပိုမိုကြာရှည် ခံလာမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Surface Pro ရဲ့ processors ဟာလည်း ယခင် မော်ဒယ်ထက် ပိုမို အစွမ်းထက် လာခဲ့ပြီး mimic pencil တစ်ခုလည်း ပါဝင်လာ ခဲ့ပါတယ်။
Surface Pro ရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၈၀၀ ( ၆၁၄ ပေါင်) နဲ့ ဂျွန်လ ၁၅ ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်၊ တရုတ်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယားနဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံများမှာ ရောင်းချ သွားမှာ ဖြစ်ပြီး mimic pencil ရဲ့ ဈေးနှုန်းကတော့ ဒေါ်လာ ၁၀၀ ခန့် ကျသင့်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ကဏ္ဍ နည်းပညာသတင်း, အသစ်ထုတ်လုပ်မှု
မည်သည့် ဘရောက်ဇာက မဆို အင်စတာဂရမ် အကောင့်ကို အက်ပ် မလိုဘဲ ပို့စ်တင်နိုင်
ကမ္ဘာကျော် ဆိုရှယ် မီဒီယာ အင်စတာ ဂရမ် အကောင့်ကို လက်ရှိမှာ ဆိုရင် အပလီ ကေးရှင်း မလိုပဲ ကြိုက်ရာ ဘရောက်ဇာ ကနေ ဝင်ရောက် အသုံးပြု နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင်ကဆိုရင် အင်စတာဂရမ်အက်ပ်ကနေ သုံးစွဲရတာဖြစ်ပြီး မိမိတင် လိုတဲ့ ပို့စ်နဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ဘရောက်ဇာကနေသုံးစွဲလို့မရခဲ့ပါဘူး။ အက်ပ်ကနေပဲ ဓာတ်ပုံတင်တာတွေကို ပြုလုပ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့ အခုဆို ရင်တော့ ဖေ့စ်ဘုတ်ခ်လိုဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ကနေ တိုက်ရိုက်အသုံး ပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်စတာဂရမ်က ဓာတ်ပုံအသားပေးတင်တဲ့ နက်ဝပ်ခ်ဖြစ်တာကြောင့် သုံးစွဲသူအများစုဟာ မိမိတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံအရည်အသွေး resolution ကောင်းစေဖို့ DSLR ကင်မရာတွေနဲ့ ရိုက်ကူးပြီးအင်စတာဂရမ်မှာ တင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဖုန်းထဲက အက်ပ်နဲ့အသုံးပြုရတာကြောင့် DSLR ကင်မရာနဲ့ ရိုက်ကူး သူတွေအတွက် အနည်းငယ်အကျပ်ရိုက်စေပါတယ်။ ဘာကြောင့် လည်းဆိုတော့ အင်စတာဂရမ်မှာတင်မယ့်ပုံကို ကွန်ပျူတာကနေ တစ်ဆင့်ချိတ်ဆက်ယူပြီး edit လုပ်ကာတင်ရတာကြောင့် ပုံအရည် အသွေးက မူရင်းလောက်မကြည်လင်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတာပါပဲ။
အခုဆိုရင်တော့ မိမိအနေနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင် ကင်မရာ မမ်မိုရီကတ်ထဲကနေ browse လုပ်ပြီး တိုက်ရိုက်တင်နိုင်တာကြောင့် အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ပုံကိုတင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ကနေတင်မယ်ဆိုရင် တောင်အိုင်ဖုန်းသုံးစွဲသူဆိုရင် DSLR ကင်မရာ ကနေပုံတွေကို အီးမေးလ်နဲ့ AirDrop ကိုကူးလိုက်ပြီး ပို့စ်တင်နိုင် ပါတယ်။ အီးမေးလ်နဲ့ Air Drop မှာ ပို့တဲ့ရုပ်ပုံတွေက မူရင်းဓာတ်ပုံ အရည်အသွေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများစုသုံးကြတဲ့ firefox ဘရောက်ဇာမှာတော့ဝင်ရတာအလွယ် ဆုံးပါပဲ။ www. instagr- am.com ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့တရားဝင် အင်စတာဂရမ်ဘလော့ဂါရဲ့ အဆိုအရ firefox နဲ့ အသုံးပြုတာက public လိုနေရာတွေမှာသုံးရင် စိတ်မချရတာကြောင့် အောက်မှာ ဖော်ပြ ထားတဲ့ Safari နဲ့ Chrome ဘရောက်ဇာတွေက စိတ်ချရမှာဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
ဆာဖာရီ(Safari)ဘရောက်ဇာက အက်ပဲလ်သုံးစွဲသူတွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ အက်ပဲ desktop နဲ့ မက်ဘုတ်ခ်အသုံးပြုသူတွေ အတွက်ပါ။
Safari ထဲကနေ >Pre-ferences> Advanced ထဲဝင်ပါ။ Show Develop menu in menu bar ဆိုတာတွေ့ရင် ဘရောက်ဇာကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
ထိပ်နားမှာ Develop> User Agent> Safari–iOS 10 -i Phone ထဲဝင်ပြီး Instagram.com ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ။
Sign in ကိုတွေ့ရင်နှိပ်ပြီး စခရင်ရဲ့အောက်ခြေ က ကင်မရာခလုတ်ပုံကိုနှိပ်ပြီး မိမိတင်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကို upload တင်ပါ။
ခရုန်း (Chrome) ဘရောက်ဇာ သုံးစွဲသူတွေအတွက် Chrome အက်ပ်ရှိရင် Chrome ထဲဝင်ပါ။ View>Developer>Developer Tools ကိုရှာပါ။
ဆိုက်ဘားမှာ ဘောက်စ်ပုံစံနဲ့ ကုတ်နံပါတ်တစ်ခုတောင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲသည်ထဲ မဝင်ဘဲကျော်လိုက်ပါ။
ဆိုက်ဘားရဲ့ဘယ်ဘက်မှာ Instagr-am.com ဆိုပြီးရိုက်ထည့်ပါ။
Sign in လုပ်ပြီး စခရင်ရဲ့အောက်ခြေက ကင်မရာခလုတ်ပုံကိုနှိပ်ပြီး မိမိတင်ချင်တဲ့ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ် ဗီဒီယိုကို upload တင်ပါ။
လက်ရှိမှာဆိုရင် တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ အင်စတာဂရမ်သုံးစွဲသူ ဦးရေသန်း ၇၀ဝ နီးပါးရှိကြောင်း စစ်တမ်းရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါ တယ်။
ကဏ္ဍ နည်းပညာသတင်း, လမ်းညွှန်
ဦးနှောက်နဲ့ တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် ကွန်ပျူတာ ဖန်တီးနေ
ကွန်ပျူတာ တွေကို လူသားရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ တိုက်ရိုက် ထိန်းချုပ်မှု ပြုလုပ် နိုင်မယ့် နည်းပညာ ဖန်တီးဖို့ ရည်မှန်း ထားကြောင်း ဖေ့ဘွတ်ခ် ကုမ္ပဏီက ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
အသံ မထွက်ဘဲ ပြောဆို ခိုင်းစေ နိုင်မယ့် ဆော့ဝဲလ်ကို စမ်းသပ် နေပြီး အောင်မြင်မှု ရခဲ့မယ် ဆိုရင် အသုံးပြု သူဟာ တစ်မိနစ်ကို စာလုံး အရေ အတွက် ၁၀၀ နှုန်းနဲ့ စာရိုက် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှု ပြုလုပ်ဖို့ မလိုအပ်ဘဲ ဦးနှောက် လှိုင်းတွေကို သိရှိနိုင်မယ့် နည်းပညာ အသစ်ကို အစောပိုင်း အဆင့်မှာ ဖန်တီး နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ဦးနှောက်လှိုင်းအကုန်လုံးကို ဖော်ထုတ်ဖို့ ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ဘဲ အသုံးပြုသူ အနေနဲ့ အခြားသူတွေ သိရှိအောင် မျှဝေချင်တဲ့ အတွေးတွေ ကိုပဲ စာအနေနဲ့ ရိုက်နိုင်အောင် ကြံဆ ဖန်တီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါစီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်မယ့် ဟတ်ဒ်ဝဲလ်နဲ့ ဆောဝဲလ် နှစ်မျိုးစလုံးကို ဖေ့ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီကပဲ ပညာရှင်ပေါင်း ၆၀ ကျော်နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နေပါပြီ။
အဆိုပါကြေညာချက်ကြောင့် ဖေ့ဘွတ်ခ်ကုမ္ပဏီဟာ လက်ရှိဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ နည်းပညာအားလုံးကို ပုံဖော်လိုက်တာလို့ ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိအချိန် အထိတော့ ဦးနှောက်ကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ကွန်ပျူတာ ချပ်စ်ပြားကို ဦးခေါင်း ခွဲစိတ်ပြီး စိုက်ထားမှ ရနိုင် ပါသေးတယ်။
ဦးနှောက်ပြင်ပကနေ ထိန်းချုပ်မှု ပြုလုပ်တဲ့ နည်းပညာကတော့ လက်ရှိအချိန်မှာ ဈေးကွက်ထဲမှာတောင် ရှိနေပြီးသားပါ။ ဒါပေမဲ့ အ ဆိုပါ ကိရိယာတွေက အခြေခံ အကျဆုံး လုပ်ဆောင် ချက်လေးတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင် ပါသေးတယ်။
အခုစီမံကိန်းအောင်မြင်မှုရရှိ ဖို့အတွက် တစ်စက္ကန့်ကို ဦးနှောက်လှိုင်း ရာပေါင်းများစွာ ဖမ်းယူနိုင်တဲ့ ဆင်ဆာတွေ လိုအပ်နေ ပါသေးတယ်။
Originally published at - http://www.mcntv.biz/news/international-news/34307/
Oway Ride ရဲ့ အပလီကေးရှင်း လုပ်ဆောင်ချက် အသစ် မိတ်ဆက်
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁ – အငှားကား ဝန်ဆောင်မှု အပလီ ကေးရှင်း Oway Ride ဟာ လုပ် ငန်း လည်ပတ်ခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် အထိမ်း အမှတ်နဲ့ ယာဉ်မောင်း ၁၀ဝ၀ ကျော်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့ အခမ်း အနားမှာ Oway Ride ရဲ့ အပလီကေးရှင်း လုပ်ဆောင်ချက် အသစ် သုံးခုကို မိတ်ဆက် ပါတယ်။
‘Oway Ride ကို အွန်လိုင်းကနေ အပလီကေး ရှင်းထဲဝင်ပြီး အမှန်တကယ် အသုံးပြုနေကြတာက နိုင်ငံခြားသားတွေ များနေပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေလဲ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေကို အသုံးချတတ်နေပြီဆိုတာမျိုး ဖြစ်စေချင် ပါတယ်၊ အဲဒါကြောင့် Oway Ride အပလီကေးရှင်းကို အားလုံးအသုံးပြုပေးကြပါ၊ ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကလဲ အားလုံး အသုံးပြုလို့ အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်အောင် အပလီကေးရှင်းလုပ်ဆောင်ချက်အသစ်တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးမှာပါ” လို့ Oway Ride ရဲ့ တည်ထောင်သူနဲ့ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ဦးနေအောင်က ပြောပါတယ်။
အဲသည်အခမ်းအနားကို ရန်ကုန်မြို့၊ ဂန္ဓမာဟိုးဆေးလ်ခန်းမမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ် လ ၃၁ ရက်က ကျင်းပပါတယ်။
• တစ်ပါတည်းပါဝင်လာတဲ့ Oway Travel က လက်ရှိမှာ ဒေသတွင်းနဲ့ ပြည်ပခရီးစဉ်တွေသွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့ အတွက် လေကြောင်းလိုင်းတွေ၊ ဘတ်စ်ကားနဲ့ ဟိုတယ်တွေကို အပလီကေးရှင်းက တစ်ဆင့် အလွယ်တကူတိုက်ရိုက်ကြိုတင် မှာယူနိုင်တာပါ။
• ခရီးသည်တွေရဲ့ လုံခြုံစိတ်ချမှုအတွက် အဆင့်မြှင့်တင်ထားခြင်းအနေနဲ့ လက်ရှိ မှာ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းကနေ သင့်ရဲ့ ချစ်ခင်ရသူတွေရဲ့ ခရီးလမ်းကြောင်းတွေကို တိုက် ရိုက်သိရှိနိုင်ပါပြီ။ တစ်ယောက်တည်း သွားလာနေ ရတဲ့ခရီးသည်များရဲ့ လုံခြုံ ရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ဖို့ tracking code (လမ်းကြောင်း လိုက်တဲ့ကုတ်နံပါတ်) ကို မိတ်ဆက်တာပါ။
• စီမံခန့်ခွဲမှု အပလီကေးရှင်းကတစ်ဆင့် ကုမဏီကား ဘယ်နေရာရောက်နေ တယ်။ ဝန်ထမ်းတွေ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာ အသုံးပြုထားတယ်ဆိုတာတွေကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်စေပါတယ်။
Oway Ride မိုဘိုင်းလ် အပလီကေး ရှင်းကို မြန်မာနဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှစ်မျိုး စလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Google Play နဲ့ App Store တို့မှာ ဒေါင်းလုပ်ဒ်ရယူနိုင်ပါတယ်။ အကောင့်အခမဲ့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ပြီး ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမြို့တွေမှာ ခရီးသည်တွေအနေနဲ့ ဘယ်နေရာမဆို အွန်လိုင်းပေါ်ကနေ ကားငှားယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ Oway Ride အပလီကေးရှင်းရဲ့ မြေပုံမှာ အနီးအနားရှိတဲ့ တက္ကစီတွေကို ဖော်ပြနေမှာဖြစ်တယ်။
From : ကုမုဒြာဂျာနယ် by အောင်ထွန်းဦး
ကဏ္ဍ နည်းပညာသတင်း, ပြည်တွင်းသတင်း
လူသား တွေရဲ့အိုမင်းမှု ဖြစ်စဉ် ဖြစ်တဲ့ ဇရာကို ပြောင်းပြန် လှန်မယ့် ထူးထူး ခြားခြား ဆေး ဖော်မြူလာကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ တွေ့ရှိမှု တစ်ခုကို သိပ္ပံပညာရှင် တွေက တွေ့ရှိ ခဲ့ကြ ပါတယ်။
အဆိုပါ ဆေးဝါးက ဒီအန်အေကို အံ့သြစရာ ကောင်း လောက်အောင် ပြန်ပြုပြင် ပေးနိုင်ပြီး မားစ် ဂြိုလ်ပေါ်က နာဆာ အာကာသ ယာဉ်မှူးတွေ ကိုတောင် ဆိုရာ ရောင်ခြည် ဖြာထွက်မှု ကနေ ကာကွယ် ပေးနိုင်ဖွယ် ရှိနေကြောင်း သိရှိရ ပါတယ်။
ဆဲလ် အိုမင်းမှု ဖြစ်စဉ်နဲ့ ဒီအန်အေ ပြန်ပြုပြင်မှု ဖြစ်စဉ်တွေရဲ့ အဓိက အချက်ပြ ဖြစ်စဉ် တစ်ခုကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက်မှာ သုတေ သီတစ်စုဟာ အဆိုပါ ဆေးဝါးကို ဖန်တီးခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြွက်တွေနဲ့ စမ်းသပ်ကြည့်ရာမှာတော့ အဆိုပါဆေးက အသက်ကြီးရင့်မှု ဒါမှမဟုတ် ဓာတ်ရောင်ခြည် ဖြာထွက်မှုထိတွေ့မှုတွေကြောင့် ဒီအန်အေပျက်စီးမှုကို တိုက်ရိုက် ပြုပြင်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ ရပါတယ်။
“ ရက်သတ္တပတ် တပတ် အကြာ ဒီဆေးနဲ့ ကုသပေး ပြီးနောက်မှာ အိုမင်းနေတဲ့ ကြွက်နဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့ ကြွက်က ရတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ခွဲခြား လို့ မရနိုင် တော့ပါဘူး” လို့ အဆိုပါ သုတေသနကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ပါမောက္ခ ဒေးဗစ်ဆင်း ကရဲယာ က ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
အဆိုပါဆေးဝါးကို လာမယ့်ခြောက်လ အတွင်းမှာ လူသားတွေနဲ့စမ်းသပ်မှု စတင်ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်လို့ စမ်းသပ်မှု အောင်မြင် ခဲ့မယ် ဆိုရင်တော့ လူသားတွေ အသုံးပြုဖို့ ထိရောက်ပြီး ဘေးအန္တရာယ် ကင်းတာ သေချာအောင် သုံးနှစ် ကနေ ငါးနှစ် အထိ ထပ်ပြီး လေ့လာ စမ်းသပ် ကြရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့ ပါမောက္ခ ဒေးဗစ်ဆင် ကရဲယာက ဆက်လက် ပြောဆို ခဲ့ပါတယ်။
ကဏ္ဍ နည်းပညာသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း, ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု
အင်တာနက်သုံးသူ ဦးရေ ၁၅ သိန်း၏ အချက် အလက်များ နေ့စဉ် ခိုးယူ ခံနေရ
ကမ္ဘာပေါ်က အင်တာနက် သုံးသူ ဦးရေ ၁၅ သိန်းလောက်ဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အချက် အလက် တွေကို ခိုးယူ ခံနေ ရပြီး အွန်လိုင်း ရာဇဝတ်မှု (Cyber Crime) ကို ကျူးလွန်သူတွေရဲ့ သားကောင် ဖြစ်နေ ကြရ ပါတယ်။
အွန်လိုင်း ရာဇဝတ်မှု (Cyber Crime) ကို ကျူးလွန် သူတွေ ရရှိတဲ့ ဝင်ငွေဟာ မူးယစ်ဆေး ကုန်ကူးသူတွေ ထက်တောင် များပြားပါတယ်။ Cyber Crime ကျူးလွန်သူတွေဟာ ဂိမ်း လင့်တွေ၊ အင်တာနက် ဝက်ဆိုဒ်တွေ ကနေ Link အတု ၄၃ သန်းလောက် ပို့လွှတ်ပြီး အင်တာနက် အသုံးပြု သူတွေရဲ့ လျှို့ဝှက် အချက် အလက်တွေကို ထောက်လှမ်း ပါတယ်။
ရရှိတဲ့ အချက်အလက်ပေါ်မူတည်ပြီး သုံးစက္ကန့်အတွင်း နိုင်ငံကူးလက်မှတ်အတု၊ ကားမောင်း လိုင်စင်အတု စတာတွေကို ဖန်တီးပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလို အတုတွေလုပ်ပြီး ရရှိတဲ့ငွေဟာ တစ်လကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၀၀၀ လောက် ရှိပါတယ်။
တရားမဝင်ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချနေတဲ့ အကြွေးဝယ်ကဒ်ဟာ ၂ ဒေါ်လာလောက်နဲ့ ဝယ်နိုင်ပါတယ်။ အကြွေးဝယ်ကဒ် အတုကိုသုံး ဘဏ်တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဒေါ်လာ ၇၀၀ အကြွေးဝယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ကဒ်အတုတွေ ကိုလည်း Cyber Crime ကျူးလွန်သူတွေ လုပ်လေ့ ရှိပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စမတ်ဖုန်း အသုံးပြုသူ တွေဟာလည်း Cyber Crime ကျူးလွန်သူတွေရဲ့ ပစ်မှတ်တွေ ဖြစ်နေတတ်ပြီး အချက်အလက်တွေ ခိုးယူနိုင်တဲ့ Malware ပေါင်းကလည်း ၂၈၀၀၀၀ ရှိနေပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံကြီးတွေမှာတော့ Cyber Law ပြဋ္ဌာန်းထားပြီး ကျူးလွန်သူတွေကို အပြစ်ပေးနိုင်ဖို့ စီမံထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ Cyber Police Development ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းဆိုင်ရာ ရာဇဝတ်မှုတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်ဖို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
Originally published at - http://mizzimaburmese.com/article/22396
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, January 17, 2017 No comments:
ကဏ္ဍ နည်းပညာသတင်း, နိုင်ငံတကာသတင်း
အိုင်ဒင်ဟိုဗင် ၊ ၁၂-၉-၂၀၁၆
နယ်သာလန် နိုင်ငံ၊ Eindhoven နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ဒတ်ခ်ျလူမျိုး သုတေသီ များက ခွဲစိပ်ခန်းသုံး စက်ရုပ် Preceyes ကို ထုတ်လုပ် ထားပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် ပထမဆုံး အကြိမ် အဖြစ် မျက်လုံးကို ခွဲစိပ်ရာတွင် ယင်းစက်ရုပ်ကို အောင်မြင်စွာ အသုံးပြုနိုင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Preceyes ကို UK ရှိအောက်စဖို့ တက္ကသိုလ်ပိုင် ဂျွန်ရက်ကလစ်ဖ် ဆေးရုံကြီးတွင် အသုံးပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အသက် ၇၀ အရွယ် လူနာတစ်ဦး၏ မျက်စိအတွင်းရှိ တစ်မီလီမီတာ ၏ တစ်ရာပုံတစ်ပုံ အရွယ်သာ ရှိသော အမြှေးပါး တစ်ခုကို ဖယ်ထုတ်ရာတွင် Preceyes ကို မျက်လုံးထဲသို့ထိုးသွင်း ကာ ပြင်ပမှ Joystick ဖြင့် ထိန်းချုပ်ပြီးခွဲစိပ် ဖယ်ရှားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Father Beaver, pictured, said he felt completely
relaxed when he was having the surgery
" ခွဲစိပ်မှု အောင်မြင်ပါတယ်။ လူနာကလည်း အခုဆိုရင် ကောင်းကောင်း မြင်နေ ရပါပြီ။ ဒီက ရှေ့လျှောက် Preceyes ကိုအသုံးပြုပြီး အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီး အနုစိပ် ဆန်လှတဲ့ မျက်စိခွဲစိပ်မှု တွေကို အရင်ကထက် လည်းပိုပြီး တိကျစွာ ဆောင်ရွက်နိုင် လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အချို့ ခွဲစိပ်မှုတွေဟာ သေးငယ်လွန်းတဲ့ အတွက် လက်နဲ့ခွဲဖို့ မဖြစ်နိုင် သလောက် ခက်ခဲပါတယ် " ဟု မျက်စိခွဲစိပ် ဆရာဝန်ကြီး တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
" ကျွန်တော့် အတွက်တော့ မျက်လှည့်ဆန်တဲ့ ကံကောင်းမှုပါပဲ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပထမဆုံး စက်ရုပ်သုံးပြီး ခွဲလိုက်တဲ့ မျက်လုံးက ကျွန်တော့်မျက်လုံး ဖြစ်နေတာ အံ့သြ၀မ်းသာဖို့ ကောင်းလှပါတယ် " ဟုလူနာဖြစ်သူ ရက်ဗ်ဘီဗာ က ပြောပြသည်။
ကမ္ဘာတစ်ဝန်းတွင် ခွဲစိပ်ခန်းများ၌ စက်ရုပ်များကို ကျယ်ပြန့် စွာ အသုံပြုလျက် ရှိသော်လည်း မျက်စိခွဲစိပ်မှုကို စက်ရုပ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းက ပထမဆုံးအကြိမ် ဖြစ်ကြောင်း၊ မျက်လုံး၏ အနောက်ဘက်အား ခွဲစိပ်ရာတွင် အလွန် တိကျသေချာရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ Preceyes တွင် ၄င်း၏ လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန် Joy Stick ပါဝင်ကြောင်း၊ ၄င်းကို ထိန်းချုပ် အသုံးပြုနိုင်ရန် Touch Screen ပါဝင်ကြောင်း၊ စက်ရုပ်လက်တံ တစ်ခု၊ မော်တာ ၇ ခု ပါဝင်ကြောင်း၊ ခွဲစိပ်ကု ဆရာဝန်၏ လက်သဖွယ် အသုံးပြု နိုင်ကြောင်း၊ Joy Stick ကြီးများကို အသုံးပြု သော်လည်း Preceyes ၏ လှုပ်ရှားမှုများမှ ကျဉ်းမြောင်း သေးငယ်လှကြောင်း၊ Joy Stick ကို လွှတ်လိုက်လျင် Preceyes ၏ လှုပ်ရှားမှု အ၀၀လည်း အလိုလို ရပ်တန့် သွားလေ့ ရှိကြောင်း သိရသည်။
Originally published at - http://www.pyichitthar.com/2016/09/blog-post_12.html
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, September 12, 2016 No comments:
ဓာတ်မှန်ထက် အဆင့်မြင့်သော T-ray ဖြင့် စာအုပ်များကို မဖွင့်ဘဲ ဖတ်နိုင်မည်
မက်ဆာချူးဆက် ၊ ၁၂-၉-၂၀၁၆
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ မက်ဆာချူးဆက် တက္ကသိုလ်မှ နည်းပညာ သုတေသီများသည် ဓာတ်မှန်ရောင်ခြည် နှင့် နီးစပ်တူညီသော Terahertz ဓာတ်ရောင်ခြည်ကို အသုံးပြုကာ စာအုပ်များ၊ ပေးစာများ အစရှိသည်တို့ ကို မဖွင့်ဘဲ ဖတ်နိုင်မည့် နည်းစနစ်သစ်ကို စမ်းသပ်အောင်မြင် ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Terahertz ဓာတ်ရောင်ခြည်ဖြင့် ပိတ်ထားသော စာအုပ်များ၊ စာအိတ်ထဲမှ စာများ၊ အထပ်လိုက် ထပ်ထားသော စာရွက်များကို မဖွင့်ဘဲ ဖတ်ရှုနိုင်မည် ဖြစ်သည့်အတွက် ရုံးလုပ်ငန်း များတွင် စာရွက် ကိုးရွက်ထက် မနည်းကို တပြိုင်နက် စကင်ဖတ် နိုင်ခြင်း၊ ရှေးဟောင်း သုတေသန လုပ်ငန်းတွင် ဖွင့်ဖတ်ရန် မဖြစ်နိုင်အောင် ရိဆွေးနေပြီ
ဖြစ်သော စာအုပ်များကို မဖွင့်ဘဲ ဖတ်နိုင်ခြင်း၊ ထို့ အပြင် သူလျှိုများ အနေဖြင့် လျှို့ ဝှက်ပေးစာ များကို ကြားဖြတ် ဖတ်ရှုရာတွင် ခြေရာလက်ရာ မပျက်အောင် ဖတ်ရှုခြင်း အစရှိသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြု သွားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒီနည်းစနစ်မှာ Terahertz ဓာတ်ရောင်ခြည် (T-ray) ကို အသုံးပြုထား ပါတယ်။ ဒီဓာတ်ရောင်ခြည် ဟာ မိုက်ခရိုဝေ့ဗ် နဲ့အနီအောက် ရောင်ခြည်တို့ အကြားက ရောင်ခြည်
အမျိုးအစား ဖြစ်ကြောင်း၊ T-ray များသည် X-ray များထက် အားသာကြောင်း၊ မျက်နှာပြင်တို့ ကို ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက် နိုင်သော ရောင်ခြည် ဖြစ်သည်ချင်း တူညီသော် လည်း X-ray သည် စာရွက်တစ်ရွက် ရှိကြောင်းသာ ဖော်ပြနိုင်ချိန်တွင် T-ray က ယင်းစာရွက်သည် အလွတ် ဟုတ်၊ မဟုတ်၊ မင်ဖြင့် ရေးထားသည်လား၊ ခဲတံဖြင့် ရေး ထားသည်လား၊ ရေးထားသော စကားလုံးများ အစရှိသည်တို့ ကို ဖော်ပြပေး နိုင်စွမ်း ရှိကြောင်း သိရသည်။
T-ray သည် X-ray ထက် အဆင့်မြင့်သည့် အပြင် ကျန်းမာရေး လောကတွင် အရေးပါသော Ultrasound ဓာတ်မှန် ရိုက်ကူးရာတွင်လည်း T-ray များကို အသုံးပြုသွားလျင် ပို၍သေချာ တိကျသော ပုံရိပ်များကို ရရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ T-ray သည် ၄င်းရိုက်ကူးသည့် အရာဝတ္ထုများက ဓာတုပစ္စည်းကို စုပ်ယူနိုင်အား မည်ရွေ့ မည်မျှ ကောင်းသည် ဟူသည့်အပေါ် အစွမ်း ထက်ရောက်မှု ပြောင်းလဲ သွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
" လေနဲ့ စက္ကူတို့ ရဲ့အလင်းယိုင်နှုန်း မတူပါဘူး။ စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာတွေကြားမှာ လေရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလေထုက ၂၀ မိုက်ခရွန်လောက်ပဲ အနက် ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူ့ ဆံပင် တစ်ချောင်းရဲ့ငါးပုံတစ်ပုံပဲ ရှိတဲ့ အထူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်နဲ့ ကို T-ray က လေနဲ့ စက္ကူရဲ့ အလင်းယိုင်နှုန်း မတူတာ ကို အသုံးပြုပြီး အဲဒီစာရွက်တွေ ပေါ်မှာ ဘာတွေရေးထား သလဲဆိုတာ ကို ဖော်ပြပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ် " ဟု သုတေသီ တစ်ဦးက ရှင်းပြသည်။
Originally published at - http://www.pyichitthar.com/2016/09/t-ray.html
ကဏ္ဍ တီထွင်ဖန်တီးမှု, နည်းပညာသတင်း
လူ့အသက်ကယ်နိုင်မည့် ပြိုင်ဘက်ကင်း သေနတ်သော့
အစ္စရေး စစ်ပြန် စစ်မှုထမ်း ဟောင်းတဦး တီထွင်တဲ့ ပြိုင်ဘက်ကင်း သေနတ် သော့ဟာ လူ့အသက်တွေ ကယ်နိုင် တော့မှာပါ။ သေနတ် ကိုင်ဆောင်ခွင့် ထိန်းချုပ်မှု အပေါ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ အချေ အတင် အငြင်းပွား နေချိန် အစ္စရေး အခြေစိုက် ဇိုးအဖွဲ့တော့ သူတို့ရဲ့ သေနတ် လုံခြုံရေး ကိရိယာဟာ ပြဿနာ အချို့အတွက် အဖြေဖြစ် လာမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဇိုးအက်ခ်စ်သော့ဟာ နံပါတ်နှိပ် သွင်းရတဲ့ သော့စနစ် ဖြစ်ပြီး ဆီမီးအော်တို မက်တစ် သေနတ်တွေရဲ့ ကျည်ထိုးလမ်းမှာ တပ်ဆင် ရတာမို့ အခွင့်မရှိသူ အဖို့ သေနတ်ကိုင်လို့ မရအောင် ဟန့်တားပေးနိုင်ပါတယ်။
“ဒီသော့ကို ကျည်တောင့်ပုံ ထုတ်ထားတဲ့ အတွက် သေနတ်ရဲ့ ကျည်ထိုး လမ်းမှာ တပ်ဆင်လို့ ရတယ်။ သော့ချ လိုက်တာနဲ့ သေနတ်က ကျည်မထွက် တော့ဘူး။”
သေနတ် ပိုင်ရှင်က ပင်းကုတ် ထည့်မှသာ သေနတ်က သော့ပွင့် သွားမှာပါ။
“သော့ဖွင့် ရတာလည်း အရမ်း လွယ်ပါတယ်။ ကုတ်ရိုးရိုး ဒါမှ မဟုတ် ကုတ်အရှည် ကြိုက်ရာ ရွေးနိုင်တယ်။ ကိုယ်နှစ်သက် သလိုပေါ့။ ၂ စက္ကန့် အတွင်း ပြန်ဖွင့် လို့ရတယ်။”
ကုမ္ပဏီ ကတော့ ဒီသော့ဟာ သေနတ်ကြောင့် မတော် တဆ သေဆုံး မှုတွေကို လျှော့ချနိုင် မယ်လို့ မျှော်လင့် ထားပေမယ့် ကိုင်ဆောင်သူ အဖို့ လိုအပ်တဲ့ အခါ သော့ အမြန်ဖွင့်နိုင်အောင် စီစဉ်ပေး ထားပါတယ်။
သမားရိုးကျ လုံခြုံရေးသော့တွေနဲ့ မတူတာက ဇိုးအက်ခ်စ်သော့ဟာ ပိန်းပိတ်နေတဲ့ အမှောင်ထု ထဲမှာတောင် သော့ပိတ် ထားရာကနေ ပစ်လို့ရတဲ့ အနေ အထားထိ အမြန်ဆုံး ဖွင့်နိုင် ပါတယ်။
လက်လှည့် ဒိုင်ခွက်မှာ ဘလူးတုသ်မော်ဂျူး အပြင် စမတ်ဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှု အာရုံခံ ပါတဲ့ အတွက် တယောက် ယောက်က သေနတ်ကို လက်ဆော့ နေပြီ ဆိုတာနဲ့ ပိုင်ရှင်ကို တပ်လှန့်ပေး နိုင်ပါတယ်။
ဇိုးကုမ္ပဏီဟာ ဒီသော့ကို စီးပွားဖြစ် ထုတ်လုပ်ဖို့ Indiegogo ၀က်ဘ်ဆိုက်ပေါ် လူထု ရန်ပုံငွေ ကောက်ခံ ရာမှာ မူလ ရည်မှန်းတဲ့ ပမာဏထက် ၃ ဆဖြစ်တဲ့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ သိန်း ရရှိ ခဲ့ပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/162964
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, August 10, 2016 No comments:
စကြ၀ဠာကြီး၏ သုံးဖက်မြင်မြေပုံကို နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံပညာရှင်များက အောင်မြင်စွာ ရေးဆွဲနိုင်ခဲ့
၀ါရှင်တန် ၊ ၁၉-၇-၂၀၁၆
စကြ၀ဋ္ဌာကြီး၏ အစောဆုံး အခန်းကဏ္ဍ အထိ လက်လှမ်းမီသော သုံးဘက်မြင် မြေပုံကို နိုင်ငံတကာ သိပ္ပံပညာရှင်များ ပေါင်းစပ်ကာ အောင်မြင်စွာ ရေးဆွဲနိုင် ခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ သုံးဘက်မြင် စကြ၀ဋ္ဌာမြေပုံကို အိုင်းစတိုင်း၏ သီအိုရီများအား အခြေခံကာ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စိုးမိုးဧရိယာမှာ အလင်းနှစ် ၆၅၀ ကျူးပစ် ဘီလီယံ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဂလက်ဆီပေါင်း ၁ ဒသမ၂သန်း ပါဝင်ကြောင်း၊ ထို့ ကြောင့် စကြ၀ဋ္ဌာ၏ အစောဆုံး အခန်းကဏ္ဍ အထိကို လက်လှမ်းမီပြီး အမှောင်စွမ်းအင်ကို တိုင်းတာနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ရေးဆွဲ ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
စကြ၀ဋ္ဌာကြီးသည် အစဉ်သဖြင့် ကားထွက် နေကြောင်း၊ သို့ သော် ယင်း ကားထွက်သော ဖြစ်စဉ်မှာပို၍ မြန်လာကြောင်း၊ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်းမှာ ဆွဲငင်အားကို
ချေဖျက်ပေးသော အမှောင် စွမ်းအင် ကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ယူဆရကြောင်း၊ အမှောင် စွမ်းအင်သည် အိုင်းစတိုင်း တွေးခေါ်ခဲ့သည့် အတိုင်း အာကာသ ဟင်းလင်းပြင်၏ ပကတိအရာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိပ္ပံပညာရှင် များက သုံးသပ်ပြသည်။
သိပ္ပံပညာရှင် နောက်တစ်ဖွဲ့ကလည်း စကြ၀ဋ္ဌာ ကားထွက်သည့် ဖြစ်စဉ် ပို၍မြန်လာ ရခြင်းမှာ အမှောင်စွမ်းအင် ကြောင့် ဆွဲငင်အား လျော့သွား၍ မဟုတ်ဘဲ ဆွဲငင်အား ကိုယ်၌က ပြိုကွဲပျက်စီး နေ၍ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ထင်မြင်ယူဆ ထားသည်။
သို့ နှင့် သိပ္ပံပညာရှင်များ ပေါင်းစပ်ကာ ဖော်ပြပါအတိုင်း စကြ၀ဋ္ဌာကြီးကိုမြေပုံဆွဲရန် အလွန်တရာ ကြီးမားလှသည့် စီမံကိန်းကြီး တစ်ခုကို စတင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး အိုင်းစတိုင်း ၏ ဆွဲငင်အား နိယာမနှင့် ရီလေတီဗီတီသီအိုရီ တို့ကို စကြ၀ဋ္ဌာအဆင့် အသုံးပြုရာတွင် လျော်ကန် သင့်မြတ်မှု ရှိသည့်အတွက် တစ်ချိန်က အိုင်းစတိုင်း
တွေးခေါ်ခဲ့သည့် အရာများသည် လက်တွေ့ ကျကာ မှန်ကန်နေသည်ကို တွေ့ ရကြောင်း သုတေသီ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
တွေ့ ရှိချက် များအရ စကြ၀ဋ္ဌာကြီး ကားထွက် နေခြင်းမှာ အမှောင်စွမ်းအင် ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင် ခဲ့ပြီး အိုင်းစတိုင်း ၏ Lambda ပကတိတန်ဖိုး အတိုင်း ကိုက်ညီကြောင်း၊ Lambda ဆိုသည်မှာ ဒြပ်နှစ်ခုအကြား ဆွဲငင်အားကို ချေဖျက်ပေးသော ပကတိစွမ်းအင် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဖော်ပြပါ စကြ၀ဋ္ဌာ၏ သုံးဘက်မြင် မြေပုံကို နိုင်ငံတကာမှ သုတေသီများက Sloan Digital Sky Survey III ၏ BOSS နက္ခတ်တာရာ ကြည့် မျှော်စင်ကို အသုံးပြုကာ ၁၀ စုနှစ်ထက် မနည်း ရှာဖွေစုဆောင်း ထားသော အချက်အလက် များကို အသုံးပြုကာ ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ စကြ၀ဋ္ဌာ ကားထွက်နေပုံ ကို ပို၍ နားလည် သဘောပေါက် စေရန်နှင့် အာကာသ ဟင်းလင်းပြင် အကြောင်း ထွက်ပေါ် ထားသော သီအိုရီများကို မှန်၊ မမှန် သက်သေ အထောက်အထား ရှာဖွေရာတွင် အသုံးပြု သွားနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်
Originally published at - http://www.pyichitthar.com/2016/07/blog-post_27.html
ကမ္ဘာတ၀န်း အင်တာနက် သုံးနိုင်မည့် ပစ္စည်းသစ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တည်ထောင်သူ မိတ်ဆက်
ဓာတ်ပုံ - မတ်ခ်ဇူကာဘတ် ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်
ဝေးလံ ခေါင်သီတဲ့ နေရာတွေပါ မကျန် ကမ္ဘာ တ၀န်းလုံး အင်တာနက် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင် စေဖို့ အတွက် ကြိုးမဲ့ Open Cellular ကို ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် တည်ထောင်သူ မတ်ခ်ဇူကာဘတ်က မိတ်ဆက် လိုက်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နာရီ အနည်းငယ် အကြာက ဒီပစ္စည်းသစ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇူကာဘတ်က ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်က တဆင့် ရေးသားပြီး မိတ်ဆက်ပေး လိုက်တာပါ။
တယ်လီဖုန်း ကုမ္ပဏီတွေ၊ သုတေသီတွေ၊ စီးပွားရေး သမားတွေ အားလုံး အသုံးပြုနိုင်အောင် Open Cellular ကို တီထွင် လိုက်ပြီး ဒါဟာ ဝေးလံ ခေါင်ဖျားတဲ့ နေရာမှာ ကြိုးမဲ့ ကွန်ရက်ကို အသုံးပြု လုပ်ဆောင် နိုင်မယ်လို့ ဇူကာဘတ်က ရေးပါတယ်။
ဒီပစ္စည်းဟာ ဖိနပ်ထည့်တဲ့ ဘူးလောက် ရှိပြီး ၁၀ ကီလိုမီတာ အတွင်း လူ ၁၅၀၀ လောက် အင်တာနက် အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး Aquila လေယာဉ်၊ လေဆာ ရောင်တန်း တွေနဲ့ OpenCellular က ကမ္ဘာ တ၀န်း လုံးကို ပိုမို နီးကပ် လာအောင် ဆက်သွယ် ပေးမယ့် ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင် အတွက် ခြေတလှမ်း ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ကမ္ဘာတ၀န်းက လူ ၄ ဘီလီယံလောက်ဟာ အင်တာနက် အသုံးပြုခွင့် မရ သလို အခြေခံ အဆောက် အဦးတွေက ဝေးလံ ခေါင်ဖျားတဲ့ နေရာကို အပြည့်အ၀ မရောက်နိုင် တာဟာ စိန်ခေါ်မှု တခုလို့လည်း သူက ရေးပါတယ်။
Originally published at - http://burmese.dvb.no/archives/158117